Maninona no be dia be ny mailaka ao amin'ny Inbox anao fa TSY VAKAO. | Martech Zone
Maninona no be dia be ny mailaka ao amin'ny Inbox anao fa TSY VAKAO.
Alahady, May 13, 2007 Asabotsy, Aprily 16, 2016 Douglas Karr
Androany dia namoaka fanadihadiana ny eROI tamin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo tamin'ny mpivarotra mailaka 200 mahery. Heveriko manokana fa mahakivy ny valiny - saika mampatahotra. Nanontany ny mpivarotra mailaka ny eROI hoe inona no heverin'izy ireo fa tena zava-dehibe. Ireto ny valiny:
RNH, Mifanaraka tanteraka amin'ireo entana 2 ambony indrindra aho. Ny fifandraisana sy ny fandefasana dia manan-danja… ny fahazoana ny hafatra mety ao amin'ny boaty no tokony ho antony lehibe. Ny famolavolana sy ny atiny mailaka no olanao, azo hatsaraina ny delivera amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanome tolotra mailaka ambony.
Ny ambany 3 dia mampiseho toetra mahatsiravina ary manondro ireo olana lehibe amin'ny mpivarotra mailaka anio. Ny Marketing amin'ny mailaka dia tokony ho 'ny hafatra mety' ho an'ny 'olona mety' amin'ny 'fotoana mety'. Tsara raha mifantoka amin'ny atiny amin'ny andronao rehetra ianao, nefa mikendry an'izany olona izany ve ianao amin'ny alàlan'ny fizarazarana na famoronana votoaty mavitrika ao anaty mailaka mifototra amin'ny mpamaky anao? Mametraka an'io mailaka io ao amin'ny boaty misy azy ve ianao rahoviana hisy fiatraikany betsaka io?
Ireo mpivarotra mailaka mandroso dia mahatsikaritra fa ny fandefasana transactional na ny triggered dia fotoana mahafinaritra ho an'ny marketing. Misy antony vitsivitsy amin'izany:
Nanomboka ny fifandraisana ny mpamandrika. (ny olona mety)
Manantena ny valiny ny mpanjifa. Tsy vitan'ny hoe manantena an'izany izy ireo fa mitaky izany! (amin'ny fotoana mety)
Ny hafatra dia mikendry hetsika iray na atiny manokana. (ny hafatra tsara)
Raha mbola ny fomba voalohany ifandraisan'ny serasera dia ny famaliana ny mpamandrika anao dia azo ampidirina ao anatin'io hafatra io ny fotoana mety indrindra raha tsy mila takiana rohy fialan-tsasatra (ekena ny hafatra transactional CAN-Spam.
Hafatra mety, fotoana mety, olona mety
Ity misy ohatra iray: nividy router tsy misy tariby aho. Ao amin'ny mailaka fanamafisana, tokony hahazo hafatra manamarina ny fivarotako aho, mampiditra ny mombamomba ny fiantsenana ary manome ahy fandefasana maimaim-poana raha te-hanampy karatra tsy misy tariby vaovao ho an'ny solosainako miaraka amina antso mihetsika izay tapitra ny tolotra afaka 10 andro . Angamba misy tolotra hanampiana azy amin'ny fandefasana ankehitriny raha manafatra azy ao anatin'ny adiny iray aho!
Ny olana, mazava ho azy, matetika dia ny rafitra no mamaritra ny hetsika fa tsy ny mifamadika amin'izay. Manana rafitra manosika ny mpivarotra mailaka amin'ny fe-potoana farany hamoahana ny gazety izahay fa tsy fe-potoana hahatratrarana ny fisokafan'ny sasany, ny tsindry ary ny fiovam-po. Ka ny mpivarotra mailaka dia manao izay nolazaina tamin'izy ireo… mamaky atiny vitsivitsy izay manandrana mihatra amin'ny lisitr'izy ireo manontolo izy ireo ary mamoaka ny mailaka amin'ny fe-potoana farany.
Mbola ratsy kokoa aza ny vokany, satria manohy mameno ilay boaty mailaka isika dia mandoa ny mpanjifa kely saina amin'ny ankapobeny mankany amin'ny fandefasana hafatra mailaka. Ampirisihiko ny mpivarotra mailaka rehetra hamaky ny bokin'i Chris Baggott sy Ali Sales - Marketing amin'ny mailaka avy amin'ny isa hahafantatra bebe kokoa.
Tags: mailaka Marketingpersonalization mailakampandefa mailakafotoana mailakafamandrihanamailaka niterakamailaka mbola tsy novakiana
Fanafohezana: Inona no dikan'ny MATY sy DITO?
May 13, 2007 amin'ny 11: 26 AM
Tsara ny Amazon amin'ity foto-kevitra "Hafatra marina, fotoana mety, olona marina". Mampiasa zavatra efa novidinao izy ireo mba hikendry anao amin'ny doka mailaka mifandraika amin'ireo fividianana rehefa misy fivarotana/fampiofanana.
Raha lazaina izany dia tsy tonga lafatra ny rafitra. Vao haingana aho no nividy compressor an'habakabaka, ary tsy nikendry ahy tamin'ny kojakoja aho, fa mbola miezaka mivarotra compressor rivotra hafa amiko izy ireo!
May 13, 2007 ao amin'ny 2: 55 PM
Manaiky an'i Slap aho, na dia mahatsiravina aza ny endrika mailaka ampiasain'izy ireo - tsara ny soso-kevitr'izy ireo an-tserasera. Tiako ny fomba hividianako boky ary tonga amin'ny 'izay vakin'ny olona hafa mamaky an'io boky io izy ireo'. Ny singa iray dia rehefa mividy fanomezana ho an'olon-kafa aho - dia mahazo tolo-kevitra momba an'io fanomezana io aho! Maniry aho fa hanivana fanomezana avy amin'ny algorithms izy ireo.
Misaotra naneho hevitra!